Azu bụ nri na-adị kwa ụbọchị nke nri Tatar. A na - emekarị azu site na anụ (nwa atụrụ, anụ ehi, anụ ịnyịnya) na akwụkwọ nri dị iche iche na ngwa nri. Azu nwere ike ime nke azu. N'ezie, ọ dabeere n'ụdị azụ anyị họọrọ.
Ọ ka mma ịhọrọ azụ na obere ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Zuru okè maka perk perch, eriri, ịnyịnya ibu na ụdị azụ ndị ọzọ dị ọcha. Ị nwere ike ime azụ azụ azụ (na nke a, anyị na-ekwu maka salmon, trout, salmon pink na ụfọdụ ụdị ndị ọzọ).
Iji kwadebe azụ, anyị na-eji fillet (ya bụ, anyị na-ebipụ ọkpụkpụ site na ọkpụkpụ ya na okpukpu abụọ, ma ọ bụrụ na o kwere mee, wepụ ọkpụkpụ). Enwere ike ịhapụ akpụkpọ ahụ, ma, n'ezie, ọ bụrụ na azụ nwere akpịrịkpa, a ghaghị iwepụ ya tupu oge eruo.
Ntụziaka maka azụ
iyak fillets - 600-800 g;
yabasị - 1-2 PC.
poteto - 3-4 PC. nkezi nha;
tomato mfri uhie uhie - 2 PC. (nwere ike dochie ya na tomato mado, mgbe ahụ 2 tablespoons);
pickled cucumbers - 3-5 PC. size size (obere obere);
mkpụrụ ọhụrụ ọhụrụ (pasili, mmanụ, coriander, basil, wdg);
ala akọrọ dị ọkụ (na nhọrọ gị, na-enweghị nnu, sodium glutamate na ihe ndị ọzọ na-adịghị edozi ahụ);
obere mmanụ na-esi nri.
Debe nri ma ọ bụ milled kpochara na ncha onwe gị. Richachaa nke ọma. Jiri oke dị mma, belata azụ ahụ n'ime obere iberibe (ihe dịka 2 na 4 cm n'ogo).
Peeled eyịm bee n'ime yiri mgbaaka (nwere ike ịbụ semirings ma ọ bụ nkeji mgbaaka), na poteto - obere brusochkami. A na-ekpuchi tomato na-ekpo ọkụ (wụsara ya na mmiri esi mmiri) ma jiri nlezianya kpochapụ. Ghaa tomato ahụ na mma dị mma. Carrots na-ete n'elu nnukwu grater ma ọ bụ na-egweri na mma. A na-eji kukumba salted n'ime obere mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ obere cubes.
N'okpo a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-eghe yabasị na poteto na mmanụ ihe oriri. Ntakịrị oge (mgbe yabasị ahụ enwetawo ndo nke agba), anyị na-etinye carrots. Fri niile ọnụ maka minit 3-5, na-emegharị ihe na shọvel.
Gbakwunye iberibe azụ na chopped tomato (ma ọ bụ obere diluted na mmiri tomato mado) na ngwa nri. Jiri nwayọọ gwakọta. Na-ekpuchi pan nke frying na mkpuchi, belata okpomọkụ na stew maka nkeji asatọ (na-emekarị n'oge a ka azụ dị njikere). Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike itinye obere mmiri. N'ikpeazụ, anyị na-etinye kukumba salted (dịka ị ghọtara, ọ dịghị mkpa nnu nnu). Mee ka efere ahụ zuru ike n'okpuru mkpuchi maka ihe dị ka minit 8-15.
Anyị na-eje ozi na okpokoro, fesa ya na chopped herbs na garlic.
Paella - uzommeputa kpochapị maka nri ụtọ Spanish
Manty na anụ uzommeputa
Guacamole bụ uzommeputa a kpochapụrụ
Tortilla - uzommeputa kpochapu
Lasagna na ihe oriri na - edozi - uzommeputa
Frittata - Ntụziaka maka nri na-atọ ụtọ Ịtali na mgbakwunye dị iche iche
Hominy si ọka groats - uzommeputa
Lasagne na anụ a na-etinye n'ime ya - uzommeputa
Ogwe osisi - ụzọ aghụghọ nke ọdịnaya na ilekọta
Gịnị na-enyere ndị chokeberry ashberry?
Kedu ka esi etinye agwọ?
Chandelier ke ime ụlọ ịwụ
Ogwurugwu na mgbidi azụ
Mmiri azụ nke ovary
Balyk si azụ
Kedu ihe eji ezigoro atịchok nke Jerusalem maka ahu na otu esi eji ya?
Akpa na-ebi akwukwo nke ohia
Darsonvalization - egosi na contraindications
Shakira kagburu ọrụ site na ime afọ atọ?
Ndị Bitcoins chịpụrụ Kardashian, ma anyị ka na-atụkwasịghị ha obi: 6 ihe ị ga-etinye na itinye ego n'ime ego mkpuchi
Esi agba akwa ochie?
Egwuregwu n'èzí n'ogige okpomọkụ
Gịnị mere nrọ nke ịchịkọta ihe?
Pudding na ngwa ndakwa nri
Kedu otu esi ahọrọ mmanụ olive?